﻿ ‘सेतो बंगला स्कुल विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिन्छ’
‘सेतो बंगला स्कुल विद्यार्थीको चौतर्फी विकासमा ध्यान दिन्छ’
मङ्गलबार ०३, बैशाख २०७६
सेतो बंगला स्कुल इटहरी ४ मा अवस्थित स्कुल हो । आफ्नै भवनमा यातायात र हरेक किसिमका पूर्वाधारले सम्पन्न यो स्कुलको आफ्नै खेल मैदानसमेत छ । स साना बालबालिकालाई मन्टेश्वरी शिक्षादेखि माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरुको अतिरिक्त क्रियाकलाप र सामाजिकीकरणमार्फत् उनीहरुको चौतर्फी विकासमा यो स्कुल लागिपरेको छ । स्कुलका विविध पक्षको विषयमा स्कुलकी सञ्चालिका कविता लम्सालसंग न्युजलयकी सरिता भण्डारीले गरेको कुराकानी
भर्नाको लागि तयारी कस्तो छ ?
हामी विगत १२ वर्षदेखि इटहरीमा गुणस्तरीय शिक्षा र नानीहरुको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासमा लागिपरेका छौँ । त्यसकारण पनि हामी जुनसुकै समयमा तयारी अवस्थामा छौँ र अहिले पनि विद्यार्थी भर्नाको क्रममा छौं ।
यस स्कुलको विशेषता के छ ?
यो बाल मैत्री विद्यालय हो । हामी पढाई सँगसँगै जीवनसँग जोडिएका गतिविधि अर्थात् जीवन बाँच्ने कला नानीहरुलाई सिकाउँछौँ । जसअन्तर्गत संगीत, नृत्य, चित्रकला, मुर्तीकलाका साथै शारीरिक विकासका लागि विभिन्न प्रकारका खेलकुद र आत्मिक विकासका लागि ध्यान र योगका कक्षाहरु पनि यस वर्षदेखि थप्दै छाँै । हामी अनुभवी र तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिककाहरुद्वारा अध्यापन गराउँछौ । यस विद्यालयको वातावरण शान्त र सौम्य छ । प्राङ्गण भित्ताका चित्र र मुर्तीहरुले नानीहरुलाई आनन्द प्रदान गरेका छन् ।
स्कुल तथा मन्टेश्वरी खोल्ने प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पारेको छ ?
इटहरीमा मापदण्ड पुरा नभएका विद्यालयहरु धेरै छन् । कतिपय विद्यालयहरुमा खेल मैदानको त कुरै छोडौँ होलसेल पसि चलाएजस्तो सटरमा नानीहरुलाई पढाइन्छ । इटहरीको जनसंख्यालाई हेरेर एउटा विद्यालयदेखि अर्को विद्यालयको दुरीलाई ख्याल गरेर मात्र सम्बिन्धित निकायले अनुमती दिएमा यस प्रकारको च्याउसरह खोलीएका मन्टेश्वरी आफै दायरमा आउँछन् । तर नीति राम्रो अनि कार्यान्वयन नहुँदा हाम्रा नानीहरु कता पढाउने भन्ने बारेमा अलमलमा परिरहनु हुन्छ ।
इटहरीको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ?
इटहरीमा सबैले राम्रो गर्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ । सबै विद्यालय दिनानुदिन नयाँ नयाँ योजना, नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याएर शैक्षिक अवस्थालाई उकास्ने प्रयासमा नै छन् ।
प्राइभेट विद्यालयहरुमा शुल्क महँगो छ भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
कागले कान लगो भनेर कान नछामिकन कागको पछि दगुर्ने प्रचलन अझै पनि कायमै रहेको छ । प्राइभेट विद्यालयले नानीहरुलाई दिएको सुविधाको आधारमा शैक्षिक क्षेत्रलाई उकास्नका लागि गरेको गतिविधिको अधारमा शुल्क एकदमै न्युन लिएको छ ।
यो विद्यालय अरु विद्यालय भन्दा के फरक छ ?
हामीले सबभन्दा पहिले इटहरीमा दण्ड सजाय निषेध गरेको बालमैत्री विद्यालयको अवधारणामा विद्यालय स्थापना गरेका थियौँ । त्यतिबेलासम्म पुरातन शैलीबाट विद्यालय इटहरीमा चलिरहेका थिए । त्यतिबेला नानीहरुको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासलाई भन्दा पढाईलाई विशेष महत्व दिइन्थ्यो भने हामी पढाई सँगसँगै चौतर्फी व्यक्तित्व विकास हुनुपर्छ भनेर एक कदम अगाडी बढेका थियौँ । यसैलाई आधार बनाएर कतिपय छिमेकी साथीहरुले हाम्रो विषयमा कुप्रचारसमेत गर्ने प्रयास गरे । पढाईलाई महत्व दिँदैनन्, अन्य गतिविधि ज्यादा गर्छन् भनेर गलत प्रचार प्रसार पनि गर्नुभयो । तर हामी सँधै नानीहरुको चौतर्फी व्यक्तित्व विकासमा अडिग रहेका छाँै ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा सुधार आइरहेको छ, भोलि निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पो नपाउने हुन् कि ?
सामुदायिक विद्यालयहरुमा सुधार आउनु खुसीको कुरा हो । किनभने यतिका वर्षमा बल्ल सामुदायिक विद्यालयका नानीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने भए । तालिम प्राप्त शिक्षक, राम्रो संरचना हुँदाहुँदै सुतेर बसेका सामुदायिक विद्यायलहरुमा सुधार आउनु आफैमा पनि सह्रानीय काम हो । आ–आफ्ना नीति र कार्यशैलीले विद्यालय चलाउने हो । सामुदयिक विद्यालयहरुले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान नगर्दा विकल्पमा बोर्डीङ स्कुलको सुरुवात भएको हो । तर बोर्डीङ स्कुललाई खासै फरक पर्दैन सामुदायिक विद्यालयले स्तर सुधारेपनि । किनकी बोर्डिङ स्कुलको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै सबलता छ ।
सेता बंगलाको भावि योजनाहरु के छन् ?
हामी नानीहरुलाई अझै गुणस्तरीय शिक्षा दिने र नानीहरुलाई असल मान्छे बनाउने अभियानमा छौँ ।
सामाजिक गतिविधि कत्तिको हुन्छन् ?
हामी सामाजिक भएमा मात्र हाम्रा नानीहरु सामाजिक हुन्छन् । तसर्थ बाटो घाटो बनाउने वातावरण, सरसफाई गर्ने, विरुवा रोपेर वातावरण प्रदुषित हुनबाट जोगाउने काममा हामी सहभागी छौँ ।
हामी इटहरीको वार्ड नं. ४ मा अवस्थित छौँ । हामी तपाईहरुका नानीहरुलाई एउटा असल नागरिक बनाउने अभियानमा छाँै । यसका यहि नयाँ शैक्षिक सत्रमा यहाँहरुका नानी हामीलाई दिनुहोस् । नयाँ भर्ना खुलेको छ । होस्टेमा हैसे गर्दै समुन्नत राष्ट्र बनाउन शिक्षाको माध्यमबाट हातेमालो गर्दै अगाडी बढौँ ।